Ogaden News Agency (ONA) – Dilal & Toogashoyin Qorshaysan oo Lagu Hayo Masuuliinta Degmoyinka Tigrey.
Dilal & Toogashoyin Qorshaysan oo Lagu Hayo Masuuliinta Degmoyinka Tigrey.
Wararka naga soo gaadhaya Kililka Tigrey ee Waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in dilal iyo iskhaarijin qorshaysan ay kuhayaan dad aan haybtooda lagaranaynin masuuliinta iyo maamullada qaar kamid ah degmooyinka Tigrey.
Dilalkan ayaa lagu tilmaamay ineey yihiin kuwo siyaasadaysan oo dad hubaysan ay fulinyaan. Xogtan ONA ay heshay ayaa sheegaysa in lagu toogtay Masuulkii Nabad Sugida ee tuulada Adhigaraad oo katirsan Gobolka Bari ee Kililka Tigrey. Masuulkan la khaarijiyay oo lagu magacaabo Asbaha Weldegebrael ayaa maydkiisa laga dhex helay gurigiisa. Wuxuu ahaa ninkan la toogtay nin kamid ah Kaadirka TPLF ee ugu firfircoon aadkana looga yaqaanay deegaankaas.
Warkan ayaa intaas raacinaya ineey boolisku baadhitaan ay kawadaan tuulada Adhigaraad iyagoo dadka deegaankaas ku dhaqan su’aalo laxidhiidha dilka masuulkan waydiiyay balse shacabku ay ka gaabsadeen ineey booliska gacan kasiiyaan arintan laxidhiidha dilka Asbaha.
Sidoo kale waxaa xaafada Imba oo isla deegaankan katirsan lagu dilay nin lagu magacaabo Dhasta Gobit oo kamid ahaan jiray askarta Wayaanaha. Dilka ninkan ayaa waxaa lagu dilay iyadoo la adeegsanayo dhagax iyo budh. Waxay ilaha aan xogtan kahellay sheegayaan in dilalka noocan oo kale ah kusii badanayaan Gobolka Tigrey.
Dhanka kale dadka indha indheeya siyaasada gumaysiga Itoobiya ayaa kufasiray dhacdooyinka noocan oo kale ah ineey salka kuhayaan khilaafka gaamuray ee udhexeeya masuuliinta kooxta TPLF ee katalisa Itoobiya taasoo ay iyaga dhexdooda is khaarijinayaan.